Bocas Villas Bocas del Toro - Bocas del Toro Luxury Hotels | Bocas Bali Luxury Water Villas
Nahoana aho no nividy bilaogy nosy
Ny tsara indrindra amin'ny Bocas Del Toro Blog
Fahasalamana sy fiarovana
Bocas Bali In The News
Faritra Bocas del Toro
Fotoana tsara indrindra hitsidihana
Ny Colonnade no ivon'ny hetsika ho an'ny Nosy Frangipani. Fihaonana ankafizina indrindra amin'ny cocktails tolakandro, fialana sasatra, ary fialamboly mamelombelona ao amin'ny dobo tsy manam-petra misy rano mamy fitopolo metatra. Hamelona indray ny feon'ny rano mikoriana avy ao amin'ny riandrano sy ny sisin'ny dobo ary mankafy ny zava-mitranga isan'andro.
Ny Elephant House Restaurant and Bar dia rafitra efa 100 taona izay nalefa antsasa-manilan'izao tontolo izao avy any Bali, Indonezia. Raiso ny volana mamiratra eny ambonin'ny rano ary angamba ny stingray mitsambikina eo am-pifalianao amin'ny lobster miaraka amin'ny divay fotsy mangatsiatsiaka tonga lafatra. Ny rivotra mafana, saika isaky ny takariva amin'ny taona, dia mitondra anao any amin'ny tontolo hafa.
Ny Coral Café and Bar dia nomena anarana avy amin'ny haran-dranomasina marefo manodidina ny nosintsika. Mialà ary ankafizo ny toerana alfresco manasa anay ho an'ny sakafo maraina, sakafo antoandro, zava-pisotro ary sakafo maivana rehefa mankafy ny jiron'ny rahona sy ny sary hosodoko miloko voapetaka miaraka amin'ny fihozongozonana hazo vita amin'ny tanana an-jatony avy any Bali.
Mandehana amin'ny antsasa-kilaometatra amin'ny lalana miolikolika mirefy folo metatra ny sakany miaraka amin'ny ranomasina tsara tarehy, zaridaina ary ala honko. Manomboka amin'ny takariva ka hatramin'ny mangiran-dratsy dia mivelona amin'ny famirapiratan'ny jiro romantika mampahatsiahy ny sarimihetsika Hollywood ny lalan-kely.
Tamin'ny Aprily 2022, nanambara ny fahavitan'ny tora-pasika ambonin'ny rano izahay, izay inoanay fa tora-pasika avo voalohany eran-tany. Amin'ny 90 metatra ny lavany ary 20 metatra ny sakany, ny Kupu-Kupu Beach dia ahitana fasika fotsy mivolombolamena, hazo rofia maniry manodidina, ary ny Tipsy Bar.
Alao sary an-tsaina ny dingana enina monja avy eo am-pandrianao mankany amin'ny dobo na ny ranomasina nofidinao. Ny villa tsirairay dia feno snorkels, tsakitsaky, labiera, divay ary soda - kintana - villa 7 ihany - fifandraisana akaiky.
Mifandraisa amin'i Bocas Bali
Jereo ny boutique anay
hotely lafo vidy any Costa Rica
© 2018-2022 Bocas Bali | Zo rehetra voatokana
Tranonkala sy sary nataon'i Laabs Creative
Politika Bocas Bali
Tafiditra avokoa ny sarany
Ny sarany dia mifototra amin'ny fipetrahana roa na tokana (tsy misy fibodoana telo na efatra)
Tsy tafiditra ny hetra raha tsy voamarika (10% ho an'ny efitrano ary 7% ho an'ny sakafo sy zava-pisotro)
Fijanonana farany ambany
Fijanonana farafahakeliny 2 alina, fijanonana farafahakeliny 4 alina manomboka ny 20 Desambra ka hatramin'ny 2 Janoary
Ny fananana olon-dehibe ihany, ny vahiny dia tokony ho 16 taona fara-fahakeliny
Tsy misy biby
Tsy azo atao ny biby fiompy
Ny famandrihana rehetra dia voamarina amin'ny mailaka
Ilaina ny fametrahana
Ilaina ny petra-bola 50% hanamafisana ny famandrihana. Ny vola dia aloa amin'ny Check-in. Raha tsy vita ny petra-bola tao anatin'ny tapa-bolana taorian'ny famandrihana dia misy fanafoanana mandeha ho azy.
Bocas Bali dia tsy mitaky fanafoanana na fanovana sara amin'izao fotoana izao. Na izany aza, raha mikasa ny hanafoana. Azafady ampahafantaro anay araka izay azo atao. Raha misy fanafoanana, ny petra-bola 50% dia haverina ao anatin'ny 30 andro.
Politika momba ny fifohana sigara
Ny lalàna nasionaly Panameana dia mandrara ny fifohana sigara amin'ny faritra iraisana, trano fisakafoanana ary trano fisotroana. Ho an'ny fampiononana ny vahiny, ny hotely dia manana politika tsy mifoka sigara any amin'ny faritra iraisana, ao anatin'izany ny dobo filomanosana, trano fisotroana ary trano fisakafoanana. Ireo vahiny mifoka sigara dia tokony hifandray amin'ny Reception rehefa tonga any amin'ny faritra voatondro hanaovana izany. Afaka mifoka sigara eny amin'ny terrasse isaky ny Villa ianao. Misy sarany $200 ho an'ny fanarenana ny efitrano ho an'ireo izay tsy manaraka ity politika ity.
Omeo azafady ny mombamomba anao sy ny daty antenainao hijanonana. Hifandray aminao izahay tsy ho ela.
Ity tranonkala ity dia voaaro amin'ny reCAPTCHA sy ny Google politika fiarovana fiainan'olona ary Terms amin'ny Service mihatra.
Miantso Anao izahay
Misaotra anao amin'ny fahaliananao amin'ny Bocas Bali. Omeo azafady ny anaranao, ny nomeraon-telefaoninao ary ny adiresy mailakao dia hiantso anao haingana izahay.